विश्व कपडा मशीनरी निर्माताहरु - Zhuji Feihu वस्त्र मशीनरी कं, लिमिटेड
समय: 2019-02-13 हिट्स:
तिनीहरूले सुन्दर छन् किनभने मिसिन पूजा र कदर र तिनीहरूले शक्ति दिनु छन्; तिनीहरूले slavery.Though पहिलो लाभ एक चिन्ता को कारण तिनीहरूले वातावरण मा एक दबाव छ कि ऊर्जा वा इन्धन खपत अब एक दिन छ आयातित किनभने तिनीहरूले hideous र loathed किनभने घृणा गर्दै. चाहे हामी मिसिन मन वा, मिसिन प्रयोग औद्योगिक विनिर्माण लागि अवश्य छ. कि यो कुनै पनि देश को आर्थिक आन्दोलन जान्छ कि औद्योगिक विकास र रोजगारीका पुस्ता को प्रतीक भइरहेको छ किन हो. वर्तमान रिपोर्ट बङ्गलादेशको राजधानी मशीनरी आयात आमूल जो एक ढिलो लगानी प्रवृत्ति संकेत यो आर्थिक वर्षको पहिलो दस महिनामा गएको छ कि देखाएका छन्. समग्र कपडा बङ्गलादेशको मशीनरी लगानी प्रवृत्ति शीर्षक 'Bangladesh'under मा वस्त्र मशीनरी लगानी चलन अघिल्लो BTT मुद्दा को आवरण कथामा चित्रण गरिएको थियो (फेब्रुअरी 2013).अघिल्लो लेखको मुख्य अन्तिम टिप्पणी लगानी क्षमता विश्लेषण वैश्विक अवसर लागि सकारात्मक संकेत थियो हुनत ग्याँस जस्तै Bangladesh.Public उपयोगिता समस्या को ढोका मा निहित & बिजुली अभाव ती दिन लगानी hindering लागि प्रमुख कारण रह्यो छ. जे सुकै होस्, हाम्रो आयात उठाउनु वा गिरावट हामी कपडा मशीनरी को आयात मा पूर्णतया निर्भर छन्. यो मशीनरी लेख Fiestaat BTT यो मुद्दा हाम्रो कपडा लागि मशीनरी निर्माताहरु अर्को श्रृंखला आउँछ & RMG उद्योग. यो कथा Ataullah अल Farhan द्वारा विकसित गरिएको छ BTT editors.Please को सक्रिय पर्यवेक्षण अन्तर्गत ध्यान दिनुहोस् कि फरवरी आवरण कथा र यो आवरण कथा को अन्य भागहरु हाम्रो आगामी मुद्दाहरू आउनेछ.
वैश्विक कोटा योजना को बहिष्करण पछि, टेक्सटाइल उद्योग उच्च गति मा पनप छ. विश्व औद्योगिक क्रान्तिको नयाँ गलियारे छ. विश्लेषकहरूले वस्त्र मशीनरी मा नवीनतम प्रविधिहरू संग थप विस्तार आशंका गर्दै. चीन जस्तै हब कपडा मशीनरी विनिर्माण, जर्मनी, इटाली, स्विट्जरल्याण्ड र भारत पहिले नै कपडा मशीनरी मा शिल्प गर्न विशाल प्रतियोगिता मा कूद र बोली भन्दा राम्रो प्रविधिहरू. ग्लोबल उद्योग विश्लेषकहरुको, इंक. (Gia) कपडा मशीनरी लागि वैश्विक बजार उच्च गुणवत्ता कपडा उत्पादन गर्ने परिष्कृत मिसिन लागि 2017.Demand द्वारा $ 22.9 अर्ब अमेरिकी पुग्न अनुमानित बढ्दै छ भनेर घोषणा गरेको छ. प्रविधिलाई जो छ, क्रय निर्णय निकै मेशिनहरू प्रभावित छ’ बहुमुखी, लचकता, र मूल्य प्रस्ताव. टेक्सटाइल मशीनरी बजार मा गतिशील वृद्धि लागि प्रमुख कारक आर्थिक पुनरुत्थान पोस्ट मंदी समावेश, Nonwoven डिस्पोजेबल कपडा उत्पादन लागि बढ्दो माग, होनहार क्षेत्रका वृद्धि माग, विशेष गरी एशिया-प्रशान्त, र वातावरण-मैत्री fibers.This लेख को लागि मांग माथि जाँदै कपडा मशीनरी विनिर्माण देशहरुमा अग्रणी संसारको केही विश्लेषण.
चीन कपडा मशीनरी र उत्पादनहरु दुवै उच्च-टेक रहेको छ:
चिनियाँ कपडा निर्माता कपडा उद्योग को प्राविधिक पक्षमा सबै भन्दा राम्रो जवाफ केही विकसित गर्दै छन्, धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु संग. कपडा उद्योग को तीव्र विस्तार संग, चीनको कपडा मशीनरी उद्योग पनि विकास लागि एक अवसर उठाउँछ, र संसारको सबैभन्दा ठूलो कपडा मशीनरी निर्माता बन्न. चीन वस्तुतः औद्योगिक मिसिन सुरु 80 धेरै बर्ष अगाडि. हाल, चीन-बनाएको कपडा मशीनरी र लागि उपकरण खाता 80 घरेलू कपडा मशीनरी बजार को प्रतिशत. तर, उद्योग सामना छ 50 बिक्री शेयर को कम प्रतिशत, र केवल 15 सकल मार्जिन को प्रतिशत, त्यसैले हानि कवरेज उच्च छ
चीन अझै पनि वैश्विक कपडा रंगशालामा मा सबै भन्दा ठूलो मशीनरी निर्माता छ. एशिया मा धेरै देशहरूमा उत्पादन संरचना को समायोजन सामना गर्दै, त्यसैले उच्च अन्त र कपडा मशीनरी पूरा सेट को मांग मांग गर्दै छन्. चिनियाँ उद्योग भारत कपडा व्यापार शक्तिहरु संग तुलना स्पष्ट लाभ छ, पाकिस्तान, बंगलादेश, र टर्की, विशेष कपास कताई उपकरण मा, कारण मूल्य पलिएस्टर उपकरण र रंगाई-मुद्रण उपकरण पूरा सेट.
चीन रूपमा स्पष्ट उच्च प्रविधी र उच्च मूल्य थपियो उत्पादनहरु मा emphasizing छ, देश यो वर्ष फोकस र हुए लागि कपडा मशीनरी एक प्रमुख क्षेत्र हुनेछ. चीन उद्योग र सूचना प्रविधि मन्त्रालय बिक्री उच्च-टेक उत्पादनहरु को प्रतिशत मूल देखि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने निर्दिष्ट गर्दछ 40 percent to 60 प्रतिशत र कुल कर्पोरेट बिक्री मूल देखि वृद्धि गर्नु�गर्न प्रतिशत उच्च-टेक उत्पादनहरु को अनुसन्धान र विकास कोष को अनुपात2percent to5प्रत्येक वर्ष प्रतिशत.
चीन कपडा मशीनरी को मात्र निर्यातक तर पनि कपडा मशीनरी को एक संभावित आयोतक छैन. कपडा मशीनरी को लागि सम्भावित आयात बजार, Jiangsu जस्तै चिनियाँ प्रान्तहरू थिए, Zhejiang र गुआंग्डोंग, जो लगभग को हिसाब 71% चीन गरेको समग्र कपडा मशीनरी आयात को. पछिल्लो वर्ष मशीनरी निर्माताहरु मा घनघोर आदेश अनुभव र बजार चिनियाँ मशीनरी मा संसारको ध्यान साक्षी. धेरै अग्रणी मशीनरी निर्माताहरु संसारभरि आफ्नो उत्पादन आधार विस्तार को लागि चीन रोजे र चीन मा आफ्नो विनिर्माण एकाइ स्थापित. तीव्र औद्योगीकरण र पछि आर्थिक विकास चीन मा पछिल्लो दशक भन्दा एशियाली कपडा उत्पादन मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि गर्न योगदान गरेको छ. यस्तो चीनको 12 औं पाँच-वर्षीय योजना, चीन सरकार पहल (2011-2015) जो कपडा र अन्य उद्योग क्षेत्रहरु लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर संग बराबरीको मा शिल्प र उपकरण मा प्राविधिक प्रगति र सुधार prioritizes एशियाई बजार मा turnmomentous वृद्धि गर्न अपेक्षित छ.
चीन स्पष्ट प्राविधिक कपडा र वस्त्र निर्माण मा उच्च प्रविधी स्वचालन को प्रयोगमा थप ध्यान छ, यसैले ती उद्योग चीन तिर उत्प्रेरित गर्नेछ मशीनरी. हालै संघाई एशिया मा सबै भन्दा फैशन सचेत शहर को एक भएको छ. चीन रूपमा कपडा र परिधान उत्पादन र मूल्य साथै खोज्न छ, तिनीहरूले यसैले निवेश ती उत्पादन लाइनहरु को लागि ठाउँ लिन थियो छिटो फैशन उत्पादनहरु लागि सार्दै.
भारत प्रविधिमा सुधार गर्न तत्पर देखिन्छ:
भारतीय कपडा मशीनरी उद्योग भन्दा बढी छ 50 वर्ष पुरानो र उद्योग दिन दिन बढ्दै छ. बारेमा 750 मशीनरी र उपकरण निर्माण एकाइहरु भारत हो, जो को भन्दा 250 एकाइहरु पूरा मिसिन उत्पादन, र बाँकी भागहरु र उत्पादन. वर्तमान मा वस्त्र मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र बैठक छ 45-50 प्रति घरेलू कपडा उद्योग को समग्र माग को प्रतिशत, जसको मुख्य संविधान ginning छ, कताई, बुनाई र प्रसंस्करण. देश सामान विनिर्माण मा धेरै राम्रो छ, मिसिन mountings & उपभोज्य भागहरु तर अझै पनि क्षेत्र थप विकास बुनाई मशीनरी उत्पादन आवश्यक छ (shuttleless looms) र केही उच्च- प्रविधी प्रसंस्करण मशीनरी.
भारतको मशीनरी निर्यातकहरु, हुनत, बनाउन विभिन्न रणनीति employing छन् तिनीहरूले को liberalized व्यापार वातावरण मा प्रतिस्पर्धी रहने पक्का 2013 र बाहिर. धेरै निर्माताहरु उन्नत स्वचालित प्रणाली मार्फत उत्पादन दक्षता सुधार कार्य लिइरहेका छन्, प्रणाली निर्माण को पुन: ईन्जिनियरिङ्, अलग उत्पादन एकाइहरु मर्ज र आधुनिकीकरण लागि योजना, मा उन्नत मांग को अघिबाटै जान्ने काम प्रविधिको upgradation र उत्पादकत्व प्रगति 2013 र अन्य निर्माता बीच परे पुरानो प्रयोग प्रविधि गर्न हौसला मार्फत परिवर्तन पनि अनुदान योजना अन्तर्गत आधुनिकीकरण लागि खोजिरहेका छन्, को decentralized गर्न प्रोत्साहन अप्रचलित प्रविधि यसको क्षमता विस्तार गर्न शक्ति करघा क्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरु संग संयुक्त उद्यम स्थापना द्वारा जोडा मूल्य जुटाउने केही योजना छन्, आफ्नो प्राविधिक को लाभ लिन, डिजाइन र मार्केटिङ प्रवीणता. अरूलाई आफ्नो मार्केटिङ क्षमता वृद्धि गर्न विदेशी आयोतकों संग सम्बन्ध गर्दै.
एक कपडा उत्पादन निर्माता रूपमा, भारत समयमा वैश्विक आर्थिक मंदी समयमा केही निर्यात क्षय सामना 2009-10, तर त्यसपछि तिनीहरूले बरामद र समयमा लक्षित माथि अलिकति बाँकी 2010-11. मा 2011-12 आर्थिक वर्ष देश USD वरिपरि गर्न कपडा र लुगा को निर्यात को लक्ष्य पूरा भएको छ 28-30 अरब. अमेरिकी र ईयू, भारतको कपडा निर्यात दुई बारेमा तेस्रो लागि खाता. अन्य प्रमुख निर्यात गन्तव्य क्यानाडा छन्, यूएई, जापान, साउदी अरेबिया, कोरिया को गणतन्त्र, बंगलादेश र टर्की.
भारत टेक्सटाइल मशीनरी को कपडा मशीनरी को मात्र निर्यातक तर पनि आयोतक छ. कपडा मशीनरी आयात समयमा अमेरिकी देखि $ 0.92billion पुगेको छ 2010-2011 अमेरिकी गर्न $ 1.38billion (अनुमानित) समयमा 2011-2012. समयमा निर्यात 2011-2012 अमेरिकी $ मा अनुमानित थिए 147 अमेरिकी $ विरुद्ध रूपमा करोड 168 लाख 2010-2011.The उदास वैश्विक बजार समयमा हासिल कम निर्यात लागि जिम्मेवार छ.
इटालियन कपडा मशीनरी उद्योग कडा बढ्छ:
इटालियन कपडा मशीनरी औद्योगिक क्षेत्र मुख्य मशीनरी निर्माताहरु वरिपरि शामिल मध्ये एक छ 300 कम्पनीहरु (लगभग employing 12,400 मान्छे) र अमेरिकी $ को एक समग्र मूल्य लागि मशीनरी उत्पादन 3.41 अरब प्रति वर्ष, निर्यात को राशि संग 80% कुल बिक्री को. इटालियन कपडा प्रविधिको गुणस्तर इटालियन मशीनरी बेचिएको छ जो देशहरूमा उच्च नम्बर द्वारा प्रमाणित छ: वरिपरि 130 विश्वव्यापी देशहरूमा.
निर्यात सधैं इटाली मा क्षेत्र का वृद्धि पछि ड्राइभिङ शक्ति थिए. प्रमुख कपडा बजार को उत्साह, एक वैश्विक मात्रा मा तिनीहरूलाई ठोकुवा गर्न इटालियन मशीनरी निर्माताहरु को क्षमता संग संयुक्त, निर्यात सम्हाल्नुभएको वृद्धि गर्न योगदान. लगभग 25 प्रति क्षेत्र का बिक्री प्रतिशत विदेश चीन निर्देशित छन्, एशियाली बजार साधारण लागि लेखा संग 50 प्रति सबै विदेशी बिक्री प्रतिशत.
चौथो क्वाटरमा समयमा 2012, कपडा मशीनरी लागि आदेश सूचकांक वृद्धि 22 प्रति अघिल्लो चौथाई तुलना प्रतिशत. अझ महत्वपूर्ण अघिल्लो वर्ष को त्यहि अवधि आदर वृद्धि भएको थियो (+46 प्रतिशत).
समग्र आदेश पनि घरेलू बजार सकारात्मक प्रवृत्ति देखि benefitted, जो एक लागि 47 प्रतिशत वृद्धि वास्तवमा पछिल्लो तीन महिना तुलना रेकर्ड गरियो. विदेशी बजार मा वृद्धि अलिकति थप मा समावेश थियो +20 per cent. लागि इटालियन कपडा मशीनरी उत्पादन को मूल्य जबकि 2011 दर्ता एक9प्रति तुलना प्रति�प्रतिशतृद्धि 2010, अमेरिकी $ देखि 3.072 अमेरिकी $ गर्न 3.328 billion. यस्तै वृद्धि निर्यात लागि रेकर्ड �अरब�यो (+10 per cent), बस अमेरिकी $ भन्दा मा मूल्यवान 2.688 billion.
यसको विपरितमा, माग घरेलू बजार देखि विशेष गरी कमजोर रहेका छ. इटाली, सामान्य मा युरोपेली संघ भर रूपमा, वर्तमान आर्थिक अनिश्चितता निवेश मा एक रिकभरी hindering छ, पनि कपडा उद्योग. वृद्धि बाबजुद मा अनुभव 2012, इटालियन मशीनरी निर्माताहरु हालको वर्षको लागि अत्यन्तै सतर्क रहन.
स्पेन कपडा मिसिन निर्माण मा आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न खोज्छ:
स्पेनी कपडा मशीनरी उद्योग भन्दा कम को बल संग सानो र मध्यम आकारको कम्पनीहरु को व्यवस्था संग thrived छ 50 कर्मचारीहरु. यी कम्पनीहरु अझै पनि मूल्य अन्तरराष्ट्रिय स्तर प्राप्त गर्न संसारका नेताहरूले संग धेरै गाह्रो प्रतियोगिता देख रहे, डिजाइन, गुणस्तर र सेवा. बुनाई मिसिन स्पेयर पार्ट्स, बुनाई, सिलाई, सामान र कताई स्पेनका कपडा मशीनरी क्षेत्र अन्तर्गत एकीकृत विभिन्न विभाग छन्. बारेमा 80 मशीनरी कम्पनीहरु पाउन आर्थिक क्रेडिट मूल्य 260 को स्पेन मा लाख यूरो.
ल्याटिन अमेरिका जस्ता देशहरूमा मा निर्यात, उत्तर अमेरिका र मध्य पूर्व पनि उल्लेखनीय छ. संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता नयाँ गन्तव्यहरू, मेक्सिको, फ्रान्स, टर्की र भारत विकास को मांग मा जाने को लागि नयाँ विकास बजार जो मनसाय हो छ.
रंगाई र खत्म क्षेत्र हुन्छन् 35 कम्पनीहरु र देश को प्रमुख क्षेत्र हो. यसलाई निम्नानुसार जो अन्य क्षेत्र संग एक कताई मशीनरी खण्ड छ 25 कम्पनीहरु. दुवै उप क्षेत्रहरु मशीनरी नयाँ नवाचारै लागि aneventual छ. स्पेन मा मशीनरी को निर्यात को छ 70% यसको कुल उत्पादन.
जर्मनी मिसिन विनिर्माण मा विश्वसनीय प्रविधि प्रदान:
एक मिसिन को सम्पूर्ण जीवन चक्र ठान्नुहुन्छ भने जर्मनी कपडा मशीनरी को acrucial निर्माता रूपमा बाहिर कूद छ र मशीनरी मा विश्वव्यापी यसको स्थान 5th रैंक द्वारा सुरक्षित गरेको छ export.The जर्मन मशीनरी निर्माताहरु प्रमुख तागत स्पष्ट बन्न. एक मिसिन को सम्पूर्ण जीवनकालमा, लगानीको लागत बारे मात्र प्रतिनिधित्व 10 गर्न 50 प्रति समग्र लागत को प्रतिशत.
दुई उत्कृष्ट वर्ष पछि, वैश्विक कपडा उद्योग व्यापार जलवायु थप मध्यम भयो 2012. यो पनि को तथ्याङ्कले तल थियो जर्मन कपडा मशीनरी उद्योग को क्रम सेवन प्रतिबिम्बित थियो 2011, तर अझै पनि एक सन्तोषजनक स्तर मा. जर्मन कपडा मशीनरी निर्यात पुग्यो 1.82 पहिलो आधा मा अर्ब यूरो 2012 (माइनस 2.7 प्रतिशत वर्ष मा वर्ष). सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजार भित्र कमजोर आर्थिक अवस्था आधारित, उद्योग एक कठिन वर्ष मार्फत जाने थियो.
एशिया यो अवशोषित रूपमा सबैभन्दा ठूलो बजार छ 40% जर्मन कपडा मशीनरी निर्यात को. भारत पछिल्लो वर्ष एशिया मा thesingle सबै भन्दा ठूलो ग्राहक हो. जनवरी र जुलाई बीच 2012, जर्मन कपडा मशीनरी लायक 111 लाख यूरो भारत पठाइएको थियो. जर्मन कपडा मिसिन लागि दोस्रो लोकप्रिय संयुक्त राज्य अमेरिका छ. को 10 जर्मन कपडा मिसिन र सामान लागि सबै भन्दा ठूलो निर्यात बजार areIndia, चीन (हङकङ सहित), टर्की, अमेरिकी,इटाली, चेक गणतन्त्र, ब्राजील, साउदी अरब र पाकिस्तान.
जर्मन कपडा मशीनरी आफ्नो उच्च गुणवत्ता र ग्राहक विशेष उत्पादन द्वारा विशेषता छ. जर्मन वस्त्र मशीनरी उद्योग मा खेलाडीहरू सेट प्रवृत्ति नयाँ आवेदन क्षेत्रहरू जो ठूलो अवसर तिनीहरूलाई प्रदान अन्वेषण गर्न रोकियो कहिल्यै.
बेल्जियम यसको कपडा मशीनरी उद्योग मा केंद्रित:
को बेल्जियम मशीनरी उद्योग, यसको कपडा मशीनरी गणना, बढ्दो कहिल्यै राम्रो औद्योगिक क्षेत्र बेल्जियम मा रोजगार मापन गरिएको छ. विगतमा5को वर्ष ayearly वृद्धि दर 4.5% यो क्षेत्र मा हासिल गरेको थियो, यसको विश्व शेयर बजार संग गुलाब 10%. कि प्रदर्शन को लागि Avital चालक को 1998-2008periods अधिक मशीनिंग उद्योग मा निवेश को दोहरीकरण थियो. देखि 2012, निवेश फेरि छानिएन छन् र बेल्जियम मशीनरी कम्पनीहरु आफ्नो उत्पादन विकास दर र लचीलापन बढाउने आफूलाई फेरबदल छन्. अब बेल्जियम मशीनरी उद्योग राष्ट्रको 3th निर्यातक छ.
बेल्जियम मशीनरी सधैं आर को ध्यान&D, रूपमा 7% यी उद्योग को जोडी �डीूल्य आर मा endowed गरिएको छ&D र अधिक रोजगार 10% कुल बेल्जियम अनुसन्धान टाउको गणना को. उद्योग कडा ऊर्जा दक्षता यसको अनुसन्धान प्रयासमा त्वरित.
को बेल्जियम कपडा मशीनरी उद्योग गणना 30 कम्पनीहरु, एक कारोबार छ 1 अरब यूरो र कुल गणना को 4000. यसको कम्पनीहरु मशीनरी इन्डोर कपडा लागि सक्रिय छन् (गलैँचा, असबाब, मखमल,तालिका – ओछ्यान तन्ना), लुगा कपडा, प्राविधिक कपडा र वस्त्र परिष्करण. बेल्जियम संसारमा सबैभन्दा छिटो हावा जेट बुनाई मिसिन उत्पादन. को बेल्जियम कपडा मशीनरी कम्पनीहरु प्राविधिक नेतृत्व रणनीति पछि लाग्न.
फ्रान्स बर्बाद रिसाइकिलिंग प्रविधिहरू मा जोड:
यो फ्रान्सेली कपडा मशीनरी उद्योग एक गतिशील क्षेत्र हो भनेर उल्लेख हुन सक्छ, टेक्सटाइल उद्योग को ऐतिहासिक विकास मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह. विशेषत, Jacquard को शानदार नाम सोच्न, सबैभन्दा परिष्कृत बुनाई प्रविधिको फ्रान्सेली आविष्कारक. फ्रान्सेली छ 35 कपडा मिसिन विनिर्माण -companies, को एक वैश्विक कारोबार संग 1.5 अरब यूरो, निर्यात 91 प्रति आफ्नो उत्पादनहरु को प्रतिशत 115 ग्राहक देशहरूमा.
फ्रान्सेली उद्योग रणनीति अब ठूलो उत्पादन देखि मानक अलग छ, उपकरण र प्रविधि आधुनिक बनाउनु, र नया र उच्च थपियो मूल्य संग उत्पादनहरु सार्न. ढाकिएको विशिष्ट क्षेत्रहरु लामो फाइबर कताई मशीनरी छन्; कपडा फोहोर रिकभरी मिसिन; यार्न उपचार र प्राविधिक कपडा को उत्पादन को लागि प्रणाली; रेखा निर्माण ननओभन्स; बुनाई लागि थप उपकरण (dobbies र jacquard टाउको); विरंजन लागि मिसिन खत्म, रंगाई, यार्न परिष्करण, बुना सामान र कपडा हाइड्रो-निष्कर्षक लागि रेखाहरू खत्म; कपडा कारखानों र हावा-कंडीशनिंग उपकरण. Nonwoven प्रक्रियाहरू जस्तै कपडा उद्योग को नयाँ क्षेत्रहरु मा, फ्रान्सेली मशीनरी नवीनता को ठ्याक्कै मा पनि छ.
आफ्नो जीवन चक्र को अन्त्यमा कपडा सामाग्री रिसाइक्लिङ र नयाँ उत्पादनहरु तिनीहरूलाई परिवर्तन, वातावरण मैत्री रहेको, पनि भएको फ्रान्सेली मशीनरी निर्माताहरु संसारका नेताहरूले हुन् समस्या छ.
टर्की कपडा सामान र मशीनरी विनिर्माण दुवै संग राम्रो तरिकाले बढ:
कपडा जीडीपी मामलामा टर्की अर्थव्यवस्था मा प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये एक छ, रोजगारी र निर्यात. लागि कपडा खाता 10 % टर्की गार्हस्थ्य उत्पादनको र 20% विनिर्माण क्षेत्र मा रोजगार को. कपडा र वस्त्र उद्योग उत्पादन को मूल्य अमेरिकी $ वरिपरि छ 30 अरब र अमेरिकी $ निर्यात 19,3 कपडा र वस्त्र प्रति वर्ष को अर्ब लायक। यो रकम संग, यो एक शेयर को थियो 19 % टर्की को कुल निर्यात टर्की मा मजबूत कपडा उद्योग बन्द कपडा मशीनरी उद्योग को विस्तार kicked. सम्म 1980 लगभग सबै कपडा मशीनरी आयात गरियो. तथापि, मा सुरु 1980 साना र मध्यम आकारको कम प्रविधी मशीनरी केही स्थानीय उत्पादन सुरु. हाल, कम्पनीहरु द्वारा निर्मित उत्पादनहरु को लाइन आधारभूत मोडेल गर्न अत्यधिक स्वचालित उपकरण देखि पर्याप्त भिन्न, र स्थानीय उत्पादकहरु सक्षम छन् गर्न प्रतिस्पर्धा संग विदेशी कम्पनीहरु मा सबै भन्दा मशीनरी विभाग, यस्तो वायुमण्डलीय जेट रंगाई रूपमा (ओभरफ्लो) वा झटका रंगाई मशीनरी.
कपडा मशीनरी निर्यात बीच एक माथितिर प्रवृत्ति छ 2002 र 2008. टर्की कपडा मशीनरी निर्यात अमेरिकी थिए $ 271 million in 2008, र अमेरिकीलाख मा��न घट्यो 263 million in 2009 एक शेयर को संग 3.2 % कुल मशीनरी निर्यात. समयमा 2010 निर्यात बजार को एक वृद्धि 266 लाख डलर. हाल, टर्की कपडा मशीनरी उद्योग सबैभन्दा मध्य पूर्व मा आधुनिक छ, उत्तर अफ्रीका, बाल्कन, बाल्टिक र मध्य एशिया र मशीनरी र कपडा उद्योग लागि आवश्यक उपकरण र सबै भागहरु र उत्पादन. यो क्षेत्र निर्यात बारेमा निर्देशित छन् 135 रैंक को आदेश देशहरूमा र प्रमुख निर्यात बजार मिश्र छन्, इथोपिया, भारत, उज्बेकिस्तान र बंगलादेश, लगभग सबै कपडा निर्माण देशहरूमा. उच्च ईन्जिनियरिङ् कौशल, उत्पादन लचीलापन, लगातार उत्पादन विकास र मिलाइएको, र कुशल बिक्री सेवाहरू पछि टर्की anrising दरमा सबै दुनिया भर टर्की गरे कपडा मशीनरी निर्यात गर्न सक्षम.
बङ्लादेशी आयात तल रहेको छ!
रूपमा प्रति हाल बंगलादेश बैंक राजधानी मशीनरी को डाटा आयात आमूल झर्यो 26 प्रति नै अवधि गत वर्ष देखि जुलाई-अप्रिल हालको आर्थिक वर्षको अवधिमा प्रतिशत कारण दुवै स्थानीय र विदेशी लगानी को ढिलो वृद्धि गर्न. बी बी डाटा खोल्ने LCS देखाउँछ राजधानी मशीनरी को आयात मात्र थियो लागि $ 1.797 तुलना पहिलो दस हालको आर्थिक वर्षको महिनामा अर्ब $ 2.421 गत वर्ष को त्यहि अवधि अर्ब. कपडा उद्योग देश को संख्या एक विनिर्माण उद्योग यसैले माथि उल्लेख राजधानी मशीनरी को सिंह शेयर यस उद्योग को लागि हुनेछ छ. तर कारण डाटा unavailability यो कि कपडा समेट्न सकेन & RMG उद्योग राजधानी मशीनरी आयात कम वा छैन. तर यो जो बैंकिङ क्षेत्रको परिणाम हुन सक्छ बंगलादेश यस आर्थिक वर्षमा एक सम्पूर्ण रूपमा मशीनरी लगानी कमी पीडित छ कि प्रवृत्ति निश्चित छ, ग्याँस बिजुली & राजनीतिक turbulences वर्ष मार्फत जाँदै. तर हामी फेब्रुअरी मुद्दा आवरण यो आर्थिक वर्ष अघि बंगलादेश वर्ष मार्फत कपडा मशीनरी आयातमा एक मजबूत वृद्धि भइरहेको थियो कथामा देखेको छु 2006 to 2011 बाट कि अघिगर्न000 to 2005 कपडा मशीनरी आयात वृद्धि एकदम वर्ष मा वर्ष वृद्धि भएको थियो.
कपडा मशीनरी विनिर्माण उत्पादन श्रृंखला लागि आवश्यक क्षेत्र हो. यस क्षेत्र मा प्रयोग कपडा मशीनरी को दायरा छ, त्यसैले, ठूलो. धेरै 80 महसुल रेखाहरू कपडा मशीनरी र स्पेयर पार्ट्स को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सीधा कपडा र वस्त्र उत्पादनहरु को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ जो कवर. यस क्षेत्र मा लगानी आयात निर्भरता कम गर्न र अन्ततः मात्र कपडा र वस्त्र उत्पादनहरु तर मशीनरी को निर्यात गर्न नेतृत्व प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ र well.Price रूपमा भागहरु पुर्जों, लचीलापन र बहुमुखी नयाँ उपकरण खरिद लागि निर्धारण कारक शामिल. जस्तै, बजार थप कुशल मिसिन को उद्भव साक्षी छ, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु मा, टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग मा तीव्र प्राविधिक अग्रिम धन्यवाद. अन्त-प्रयोगकर्ता लागत उचित मा availed गर्न सकिन्छ कि उन्नत लचीलापन संग पूरा स्वचालन समाधान झन् खोजिरहेका छन्.
अघिल्लो : सोधिने प्रश्न